उद्यमी चन्द्र ढकालको अमलाचौरदेखि व्यावसायिक नेतृत्वसम्मको यात्रा - Jagaran Post
जागरणपोस्ट १४ मंसिर २०७७, आईतवार १५:३७
काठमाडौँ | भनिन्छ– बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नजिकैको घण्टाघरले बिहानको ४ः३० बजेको समय सूचक घण्टी बजायो र राजधानीवासीलाई नयाँ बिहानीको सन्देश दियो ।
चराहरु ब्युँझिएर बास बसेको ठाउँबाट चलमलाउन थाले, उड्न थाले । नयाँ दिनका लागि नवीन आशाहरु खोज्दै मानिसहरुले विस्तारै ओछ्यान छाडेर निस्किने तयारी गर्न थाले । कति त बिहानको हिँडाइ (मर्निङ वाक) को बाटो तयगर्ने तरखरमा थिए । यता राजधानी काठमाडौँको कमदलादिस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठनमा भने रातपछिको बिहान हुन पाएको थिएन, रातिदेखिकै रौनक थियो नेपाल उद्योग वाणिज्यम महासंघको निर्वाचनको । बिहानको ४ः५० बजे निर्वाचन समितिले घोषणा ग¥यो– ‘महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा व्यवसायी चन्दप्रसाद ढकाल विजयी हुनुभएको छ ।
रासससँगको कुराकानीमा केही समयअघि ढकालले भन्नुभएको थियो “मानिसलाई कतिपय अवस्थामा नसोचिएको सफलता पनि हात लाग्छ अथवा केही नसोचिएका कुराहरु पनि हुन सक्छन् । तर पनि ती सबै नराम्रा पनि त हुँदैनन् ! जे हुन्छ राम्रै हुन्छ ।” तर उहाँको अहिलेको यो सफलता भन्दा वास्तविक पारिवारिक जीवन निकै पर थियो । तर आज बिहान भने त्यो सबै स्मरण गर्ने फुर्सद उहाँसँग थिएन ।
उहाँले प्राप्त गरेको सफलताबाट अरुलाई प्रेरणा पनि प्राप्त हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी बढेकाले अझै ठूलो मात्रामा मुलुकमा व्यवसायको विकासका लागि ढकालले वातावरण निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने आशा यतिखेर देशका समग्र व्यवसायीको छ । हरेक बिहानीले नयाँ आशा बोकेर आएजस्तै बिहान सबेरै उदाएका चन्द्रको आगामी यात्राले पनि नेपालको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा समृद्धिको ढोका खोल्नसक्ने नयाँ आशाको सञ्चार गर्न सकोस् । -(RSS)
संघीयताको नाङो रूप सामान्य रूपमा पनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ
अभिनेता अनमोल केसीको आज जन्मदिन !
गौरी मल्लको आज ५४ औं जन्मजयन्ती, देश तथा
आज : लुई ब्रेलको जन्मदिन, जसले ब्रेल लिपिको
सुपरस्टार रजनीकान्तद्वारा राजनीति नगर्ने घोषणा
निकोलाई चाउचेस्कु : अति महत्वकांक्षाको दुर्दान्त अन्त्य
“राष्ट्रपति पदको गरिमा”
बक्सर अविरल घिमिरे हिमालयन चितुवा प्रशिक्षणमा व्यस्त